डान्सरबाट क्रिकेटर !
बाह्रखरी - भुपेस उपाध्याय आइतबार, चैत २९, २०७७
तस्बिर : क्यान ।
काठमाडौं । उमेरले १३ वर्ष । नृत्य र संगीतमा बेग्लै रुचि । उनी विद्यालय स्तरमा हुने प्रायः सबै नृत्य प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने गर्थिन् ।
त्यही नृत्य मोहले उनलाई त्यसैमा आफ्नो पहिचान बनाउने सोच पलायो । नृत्य सिक्न थालिन् । उनलाई नृत्यले आफ्नो जीवनलाई लय दिन्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
तर उनको लचिलो शरीर नृत्यका लागि होइन क्रिकेटका लागि रहेछ । उनलाई नृत्यले होइन क्रिकेटले साथ दियो ।
उनी अर्थात लेग स्पिनर लक्ष्मी साउद । हालै राजधानीमा सम्पन्न मेयर कप महिला क्रिकेटको दुई खेलमा ‘प्लेअर अफ दी म्याच’ बन्न सफल खेलाडी ।
लक्ष्मी अहिले २० वर्षकी भइन् । क्रिकेट खेल्न दिदीले दिएको सुझावलाई पछ्याउँदा अहिलेको अवस्थामा पुगेको उनी सम्झिन्छिन् । “जेठी दिदी (कमला साउद)ले क्रिकेट खेल्न सुझाउनुभयो । न क्रिकेटको ज्ञान न त क्रिकेटमा पारिवारिक माहोल । मैले स्वास्थ्य राम्रो बनाउने सोचले क्रिकेट खेल्न सुरु गरेँ,” शनिबार त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको ललितपुर मेयर कपको फाइनल खेलपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उदीयमान खेलाडी लक्ष्मीले आफ्नो क्रिकेट करियरको सुरुवातका दिन सम्झिन् ।
क्रिकेटमा लाग्दाताकासम्म नृत्यमै भविष्य देखेकी लक्ष्मीले अहिले क्रिकेटमा भविष्य बनाउने सोचेकी छन् । २०७३ सालतिर उनी ढनगढी क्रिकेट मैदान नजिकै रहेको कैलाली क्रिकेट एकेडेमीमा जोडिन पुगिन् । सिक्ने सिकाउने माहोलमा भिझ्न उनलाई धेरै समय लाग्यो । केहीदिन त उनले अरूले खेलेको मात्र हेरिन् ।
अरूले खेलेको हेर्दाहेर्दै उनलाई विस्तारै खेल्ने रहर जाग्यो । उनलाई फिल्डिङ र ब्याटिङमा नै रुचि थियो । तर, छोटो कद भएकाले उनले बलिङ गर्न थालिन् । प्रशिक्षक र दाइहरूबाट त्यही कुराको सुझाव आयो । अनि सुरु भयो लक्ष्मीको क्रिकेट यात्रा ।
“व्यवसायिक रूपमा नै क्रिकेट खेल्न सुरु गरेको भने होइन । घुम्न पाइन्छ, रमाइलो हुन्छ भनेर खेल्न थालेँ । परिवारमा सबैजना मोटो हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले स्वास्थ्यका लागि पनि खेलेँ । विस्तारै रुचि बढ्दै गयो । अनि सुरु भयो क्रिकेट यात्रा,” लक्ष्मीले भनिन् ।
लक्ष्मीले २०७४ सालसम्म नृत्य गरिन् । त्योभन्दा पहिले उनलाई खेलाडी नै हुन्छु अनि राष्ट्रियस्तरमा नै चर्चा बटुल्छु भन्ने लागेको थिएन । ०७४ सालमा धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटबाट उनको व्यवसायिक क्रिकेट सुरु भयो । ‘डेब्यु’ प्रतियोगितामा नै उनी ‘इमर्जिङ प्लेअर अफ दी टुर्नामेन्ट’ घोषित भइन् ।
डेब्यु प्रतियोगितामा पाएको सफलता र सबैले दिएको मायाले उनमा नृत्यप्रतिको मोह हराउँदै गयो । उनी अब क्रिकेटको माहोलमा घुलमिल हुन थालिन् । प्रशिक्षकहरूले पनि उनलाई नृत्यभन्दा क्रिकेटमा नै राम्रो भविष्य भएकाले त्यसैमा लाग्न सुझाए । त्यसले उनलाई ऊर्जा दिने काम गथ्र्यो । त्यसैको फलस्वरूप आज उनी यो स्थानसम्म पुग्न सफल भएकी छन् ।
“म गीत सुन्ने वित्तिकै नृत्य गरिहाल्थेँ । मैले नाट्यश्वरी क्लबमा नृत्य सिक्थेँ । एकपटक बुटवलमा भएको ‘ए एण्डजी’ नृत्य प्रतियोगितामा त म टप १० मा पुग्न सफल भएकी थिएँ । अहिले नृत्यभन्दा क्रिकेट नै प्यारो लाग्छ,” लक्ष्मीले भनिन् ।
अब उनलाई राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने सपना छ । अहिले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीमा पनि लेग स्पिनरको खाँचो छ । राष्ट्रिय टोलीकी उप–कप्तान सिताराना मगर र कप्तान रुविना क्षेत्रीको नजरमा पनि लक्ष्मी पर्न सफल छिन् । आफू राष्ट्रिय टोलीका लागि तयार रहेको उनी बताउँछिन् ।
“चार वर्ष क्रिकेटमा बिताएँ । अब योबाट टाढा जाने सोच मैले बनाएकी छैन् । आफ्नो ठाँउ सिनियरमा बनाउने योजना छ । मैले एक बेग्लै स्थान बनाउने छु । त्यो मेरो स्थान ओगट्ने कुनै खेलाडीमा सोच आए मैले गरेको मेहेनत कति छ भन्ने बुझ्नुपर्ने समय आआस्,” उनले भनिन् ।
लक्ष्मीलाई बलिङभन्दा ब्याटिङ गर्न मन पर्छ । तर, बलिङमा पाइरहेको सफलताले उनलाई फरक पाटो अपनाउने सोच भने आएको छैन । उनलाई माया गर्ने ‘दाइहरू’ले पनि ब्याटभन्दा पहिले बल नै किनेर दिएका थिए । उनीहरूले बलिङमा नै सफल बन्न आफूलाई सुझाएको उनी स्मरण गर्छिन् ।
अफ स्पिनरबाट बलिङ गर्न सुरु गरेकी उनले अहिले लेग स्पिनरको रूपमा खेलिरहेकी छन् । यही रोल नै उनलाई प्यारो लागिरहेको छ । नलागोस् पनि किन यसैले उनलाई सफलता दिलाएको छ । उनी यसैमा पोख्त बन्न चाहन्छिन् ।
“अफ स्पिनरबाट मैले क्रिकेट करियरको सुरुवात गरेँ । अहिले लेग स्पिनरको रोममा आफूलाई बाँधेकी छु । मलाई सफलता पनि यसैबाट मिलिरहेको छ । यसैमा पोख्त बन्ने मेरो योजना छ । सफलता मिल्दैछ अब ब्याटिङतर्फ पनि केही गर्ने सोच बनाएकी छु,” लक्ष्मीले भनिन् ।
सुदूरपश्चिममा जन्मिएकी लक्ष्मीको क्रिकेट करियरको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण हो । डब्लूसीएल पछि उनी राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परिन् । बन्द प्रशिक्षणमा नाम चलेका खेलाडीसँग खेल्न पाउँदा उनलाई क्रिकेटमा नै आफूलाई सफलता मिल्छ भन्ने लागेको थियो ।
त्यसपछि लक्ष्मीले चीनको साङ्घाईमा भएको यू–१९ क्रिकेटमा सहभागिता जनाइन् । त्यसमा पनि उनी सफल भइन् । त्यसपछि दाङमा भएको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा पनि उनले राम्रो प्रदर्शन गरिन् ।
उनले ललितपुर मेयर कपको पहिलो खेलमा भने मौका पाइनन् । दोस्रो खेलमा खेलिन् । उनको ओभर राम्रो भएन । उनले २ ओभर बलिङ गर्दै १९ रन खर्चिन् तरपनि टिमले तेस्रो खेलमा उनलाई मौका दियो । त्यसमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै ह्याट्रिकसहित ४ विकेट लिइन् ।
“पहिलो खेलमा बेन्चमा बसे । दोस्रो खेलमा प्रशिक्षकले स्थान दिनुभयो । खेल्ने मौका पाए । तर दोस्रो खेल मेरो लागि राम्रो भएन् । तेस्रो खेलमा टिमले विश्वास गर्‍यो । र ह्याट्रिकसहित ४ विकेट लिएँ । चौंथो खेलमा पनि ओभर ह्याट्रिकसहित ४ विकेट लिएँ,” लक्ष्मीले आफूले पाएको सफलतालाई सम्झिन् ।
#ललितपुर मेयर कप
सफलतासँगै जिम्मेवारी पनि थपिँदै छ : कुशल
खेलाडीकै खर्चमा पदकको अपेक्षा !
पहिलो ब्याचकी खेलाडी, अझै उत्कृष्ट फर्ममा !
काठमाडौं । रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा सहज जित निकालेको छ । साविक विजेता रियलले सहज जित निकाल्दै उपाधि... १० घण्टा पहिले